सामाजिक विकास मन्त्री सोडारी पदमुक्त, सांसद सुवेदीलाई मन्त्री बनाउने तयारी – Hello Punarwas
On २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १५:२९
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गरिएको छ ।
मन्त्री परिषद विस्तार भएदेखिनै पटक–पटक विवादमा आएका मन्त्री सोडारीलाई मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले हटाएको हो ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीका अनुसार औपचारिक निर्णय भएको छैन । आज चार बजे आधिकारिक कुरा थाहा हुने छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री सोडारीका ठाउँमा सांसद कृष्ण सुवेदीले सपथ ग्रहण गर्ने तयारी रहेको छ । सोडरी कैलाली क्षेत्र नं. ४ (क) बाट निर्वा्चित भएका थिए भने सुवेदी कैलाली क्षेत्र नं. ४ (ख) बाट निर्वा्चित भएका हुन् ।
तिहारका बेला मन्त्रीको गाडी दुर्घटना सम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएपछि मन्त्री सोडारीलाई प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयले हटाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिव दीर्घ जोशीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएको पुष्टि गरे । मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडी दुर्घटना भएको प्रकरणका कारण पार्टीको निर्देशनमा सोडारीलाई मन्त्रीबाट हटाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री सोडारीले प्रयोग गर्दै आएको बा २ झ ३१२५ नम्बरको स्कारपियो जीप शुक्रबार राति कैलालीमा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा ३ जना घाइते भएका थिए ।
मन्त्री सोडारी जीपमा सवार रहे÷नरहेको भनेर विवाद चलेको थियो । दुर्घटनामा परी जीप चालक गोदावरी नगरपालिकाका धोजेन्द्र शाही, निजकै भान्जी नाता पर्ने १० वर्षीया आयुश्मा शाही र से ३ प २४२० नम्बरको मोटरसाइकलका चालक गौरीगंगा नगरपालिकाका सुरेन्द्र चन्द घाइते भएका थिए ।